Sarkaal ka tirsana al-Shabaab oo xiriir la lahaa weerarkii saldhigga Manda Bay oo la dilay… – Hagaag.com
Sarkaal ka tirsana al-Shabaab oo xiriir la lahaa weerarkii saldhigga Manda Bay oo la dilay…
Dowladda Maraykanka ayaa xaqiijisay in sarkaal katirsan Alshabab oo duqayn lagu la dilay bishii Febraayo 22 uu xiriir la lahaa weerarkii saldhiga Maraykanka ee (Manda Bay.)
Maraykanku wuxuu sidoo kale sheegay in weerarkaas lagu dilay xaaskiisa, oo sidoo kale xubin caan ka ahayd al-Shabaab.
“Sarkaalka aan dilnay wuxuu mas’uul ka ahaa qorsheynta iyo hagida hawlgallada argagixiso ee xadka Kenya, oo ay ku jiraan weerarkii ugu dambeeyay ee Manda Bay, iyo xaaskiisa, oo qaabilsanayd fududeynta howlo badan oo argagixiso,” ayaa lagu yiri warkaan.
Jeneraal Stephen Townsend, Taliyaha Taliska Mareykanka Africa Command ayaa sheegay in Mareykanka iyo la-hawlgalayaashiisa ay daba galeen kuwii mas’uulka ka ahaa weerarkii saldhigga Mareykanka iyo Kenya.
“Talaabadaan waxay muujineysaa inaan sii wadi doonno dadaallada aan ku beegsanayno kuwa mas’uulka ka ahaa weerarkii Manda Bay iyo kuwa doonaya inay waxyeello u geystaan Mareykanka iyo saaxiibbadeena Afrikaanka ah,” ayuu yiri Jeneraal Stephen.
Isla markii uu dhacay weerarkii saldhigaasi, General Stephen Townsend wuxuu sheegay in talisku uu qaaday talaabooyin deg deg ah oo lagu kordhinayo awooda lagu raadraacayo kuwii weerarka soo qaaday iyo shabakadooda.